China ahaziri Siliver Doorbell Igwefoto Housing Mere site Plastic Injection N'emepụta na ndị na-ebubata ihe |DTG
Akpa Vortex Fountain
Akpa oghere anya LED
Mgbakọ mkpuchi mkpuchi igwe igwe kwụ otu ebe
Plastic injection ebu
Ngwa ngwa ngwa eletrọnịkị
Ụdị mbipụta 3D
Ụdị nkedo Vacuum
OEM Plastic injection Tooling Mold of Storage Box S ...
Ọkachamara China ahaziri Plastic Injection Moul...
Ụlọ igwefoto Siliver Doorbell ahaziri iche nke emere site n'ịkpụzi ịgbanye plastik
Anyị na-enye naanị ọrụ ahaziri ahazi, dabere na eserese 3D zuru ezu nke ndị ahịa na-enye.Bupu anyị sample iji wuo eserese 3D dịkwa.Anyị anaghị ere ngwaahịa ntụpọ!
Nke a bụ ụlọ igwefoto mgbịrịgba ọnụ ụzọ, ihe ya bụ Acrylonitrile Butadiene Styrene plastic +Polycarbonate (Mbibiri bụ ABS+ PC).Ọ bụ ebu oghere is1 * 2, na ebu ihe bụ S136 HRC48-52, ebu ndụ 50 puku shot, injection okirikiri bụ 50 sekọnd. Ọdịdị ya dị nnọọ anya-akụta, n'ihi na elu ọgwụgwọ na-brush + agụụ plating elu-glossy ọlaọcha. .
Ịrụ ọrụ ihe
ABS + PC na-ejikọta njirimara mara mma nke ihe abụọ ahụ.Ihe sịntetịt dabara adaba maka ụlọ nke ngwaahịa eletrọnịkị, na-arụ ọrụ zuru oke, ike dị elu, nkwụsi ike kemịkal, na akụrụngwa eletrik.
Nke a bụ ngwaahịa mgbịrịgba ọnụ ụzọ mara mma.Ọdịdị chọrọ ga-adị nnọọ mma ndị ahịa.A na-eme ụdị ihe osise ahụ na ebu;n'ime usoro mmepụta ịkpụzi injection, e kwesịghị inwe ọrụ mmanụ n'elu ebu.A na-emepụta rọbọt ahụ na-akpaghị aka, onye ọrụ na-ebukwa ngwa ngwa.Ị ga-eyiri uwe aka na-enweghị uzuzu ka ịzenarị ọsụsọ si n'aka gị ịrapara na ngwaahịa ahụ.Ọ bụrụ na e nwere ọrụ mmanụ, ọ ga-emetụta kpọmkwem adhesion nke electroplating.
Ejiri udidi ebu mebere elu ahịhịa a.
Kedu ihe na-aga n'ihu nke ederede ederede?
Basemap mmepụta → foto platemaking → mbipụta ihuenyo → ngwakọta ink → decal paper printing decorative pattern → ink ihicha → ebu tupu ọgwụgwọ → decal transfer → ihicha → ndozi → corrosion → nyocha → nhicha na mgbochi nchara.
Usoro ụkpụrụ na usoro ebu n'elu corrosion akpụkpọ udidi:
Mold etching na-anabata ink mbufe mgbochi corrosion, ụkpụrụ ịchọ mma na-ebipụta ihuenyo na mpempe akwụkwọ, wee bufee ụkpụrụ ịchọ mma n'ụdị ya site na usoro ịse foto.Mgbe ihicha ma kpụchaa ya, a na-eme corrosion kemịkalụ ka ọ na-etolite n'akpụkpọ ahụ.Pịnye ụkpụrụ ịchọ mma.
Nke ahụ bụ iwebata ngwaahịa a, ọ bụrụ na ị nwere ụdị imewe dị mkpa iji mee prototyping ma ọ bụ ebu, nabata anyị ka ịkpọtụrụ anyị n'oge ọ bụla.
Nzọụkwụ azụmaahịa anyị
Usoro ahia ahia nke DTG
Dị ka sample, ịbịaru na kpọmkwem chọrọ.
Ihe ebu, nọmba oghere, ọnụahịa, onye na-agba ọsọ, ịkwụ ụgwọ, wdg.
mbinye aka S/C
Nkwado maka ihe niile
Kwụ 50% site na T/T
Nyochaa imepụta ngwaahịa
Anyị na-elele nhazi ngwaahịa.Ọ bụrụ na ụfọdụ ọnọdụ ezughị oke, ma ọ bụ enweghị ike ime ya na ebu, anyị ga-ezigara ndị ahịa akụkọ ahụ.
Anyị na-eme atụmatụ ịkpụzi na ndabere nke nrụpụta ngwaahịa enwetara, ma ziga ndị ahịa maka nkwenye.
Ngwá ọrụ ebu
Anyị na-amalite ime ebu mgbe ebu imewe kwadoro
Ziga ndị ahịa akụkọ otu ugboro kwa izu
Zipu ihe nlele nnwale ma nwalee mkpesa nye ndị ahịa maka nkwenye
Dị ka ndị ahịa si nzaghachi
50% site na T / T mgbe onye ahịa kwadoro ihe nlele ule na àgwà ebu.
Ebufe site n'oké osimiri ma ọ bụ ikuku.Enwere ike ịhọpụta onye mbugharị n'akụkụ gị.
Ụlọ ọrụ anyị na-enye ezigbo onye na-ere ahịa maka ọkachamara na nkwurịta okwu ngwa ngwa.
Anyị nwere ike mmebe otu, ga-akwado ahịa R & D, Ọ bụrụ na ndị ahịa na-eziga anyị samples, anyị nwere ike ime ka ngwaahịa ịbịaru na-eme mgbanwe dị ka kwa ahịa arịrịọ na-eziga ndị ahịa maka ihu ọma.Ọzọkwa, anyị ga-akwado ahụmịhe na ihe ọmụma anyị iji nye ndị ahịa aro teknụzụ anyị.
Ọ bụrụ na ngwaahịa anyị nwere nsogbu dị mma n'oge oge nkwa anyị, anyị ga-ezitere gị n'efu maka dochie mpempe agbaji;ma ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla okwu na-eji anyị ebu, anyị na-enye gị ọkachamara nkwurịta okwu.
Anyị na-eme nkwa ọrụ dị ka n'okpuru:
1.Lead oge: 30-50 ụbọchị ọrụ
2.Design oge: 1-5 ụbọchị ọrụ
3.Azịza email: n'ime awa 24
4.Quotation: n'ime ụbọchị ọrụ 2
5.Customer mkpesa: zaghachi n'ime 12 awa
6.Oku ekwentị: 24H/7D/365D
7.Spare akụkụ: 30%, 50%, 100%, dị ka kpọmkwem chọrọ
8.free sample: dị ka kpọmkwem chọrọ
Anyị na-ekwe nkwa ịnye ọrụ ịkpụzi kacha mma na ngwa ngwa maka ndị ahịa!
GỊNỊ mere ị ga-eji họrọ anyị?
Nhazi kacha mma, ọnụahịa asọmpi
20 afọ ọgaranya ahụmahụ ọrụ
Ọkachamara na imewe & ime plastik ebu
Otu nkwụsị ngwọta
Kachasị mma mgbe-ire ọrụ
Ọpụrụiche n'ụdị ụdị injection plastik.
Ahụmahụ ebu anyị!
DTG-- Mpekere rọba nke a pụrụ ịdabere na ya na onye na-ebubata ihe ngosi!
Nke gara aga: Nylọn moto nwere ogo dị elu ahaziri ahaziri site na ịkpụ injection plastik
Osote: PC+ ABS ahaziri ahazi Plastic Injection Molded Housing
Omenala ABS Plastic Injection Molding Housing
PC ahaziri ahazi+ABS Projector Plastic injection M...
Ọ bụrụ na ị nwere faịlụ eserese 3D / 2D nwere ike ịnye maka ntụaka anyị, biko zitere ya ozugbo site na email.
Adreesị: Ụlọ 707, Yulong International Building 1, No.987, Anling Road, Xiamen 361006, Fujian, China
Ihe dị iche n'etiti plastic ebu na d ...
Ngwa nke teknụzụ obibi akwụkwọ 3D ...
Usoro ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa nke ngwa ụlọ ...
Nkọwa zuru ezu nke ABS plastic injec ...
Ndụmọdụ ụfọdụ gbasara ịhọrọ ụdị plastik